﻿ ​धरानसम्म लाने गरी विराटनगर–इटहरी मोनोरेल (भिडियोसहित)
विराटनगर । विराटनगरदेखि धरान सम्म मोनोरेल कुद्ने योजना बनाइएको छ । सोअनुसार पहिले विराटनगरदेखि इटहरीसम्म मोनोरेल निर्माणको लागि एउटा कम्पनिले लगानी जुटेको घोषणा गरेको छ ।
मोनोरेल निर्माणका लागि भारतीय कम्पनिसँग ३२ अर्बको लगानी सम्झौता भएको मोनोरेल निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन तथा छलफल गरिरहेको विराट मोनोरेलका अध्यक्ष परमानन्द मेहताले जानकारी दिए । केही दिनमै पत्रकार सम्मेलन गरेर कम्पनिले यो विषयमा जानकारी दिनेछ ।
उनले लगानी जुट्ने पक्का पक्की भइसकेको बताउँदै नेपाल सरकारले अनुमति दिए पैसाको खाँचो नपर्ने जानकारी दिए । ७० प्रतिशत विदेशी लगानी र ३० प्रतिशत स्वदेशी लगानीमा मोनोरेल बनाइने प्रारम्भिक तयारी छ । स्वदेशी लगानीको लागि स्थानिय सरकारहरुसमेत सहभागि हुने बताइएको छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी भिनेष्टाले मोनोरेलमा लगानी गर्न लागेको हो । यो कम्पनिले जापान र सिंगापुरमा रहेको मोनोरेलको प्रविधि प्रयोग गर्नेछ । मोनोरेलका लागि बिराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा गाउँपालिका, दुहबी नगरपालिका र इटहरी उप महानगरपालिकाले सहमति दिईसकेका छन् ।
आगामी २ हप्ताभित्रै मोनोरेलको डीपीआर निर्माण आरम्भ सुरु गर्ने जनाइएको छ । सो विषयमा चाँडै पत्रकारहरुसहितको प्रेजेन्टेसनको तयारी भइरहेको छ । करिब ३० किलोमिटर लामो मोनोरेलले १० वर्षभित्र लगानी उठाई सक्ने बताइएको छ ।
कसरी गुड्छ मोनोरेल ?
अहिले निर्माणाधिन ६ लेनको सडकको बिचबाट मोनोरेल गुड्नेछ । जमिनमा गाडिएका खम्बाको माथि रेल गुड्नेछ । ‘यसले बाटोलाई डिस्टर्ब पनि गर्दैन,’ निर्माण पक्षसम्बद्ध एकजनाले भने, ‘इटहरीदेखि धरानसम्म बिचमा जंगल पर्ने हुँदा पहिले विराटनगरदेखि इटहरीसम्म मात्रै भएपनि रेल कुदाउने तयारी गरिएको छ ।’ विराटनगर–धरान मोनोरेलले एक पटकमा ५ सय जना यात्रु बोक्ने क्षमता राख्ने बताइएको छ । मोनोरेल बिहान ५ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म चल्नेछ ।
कसरी आयो मोनोरेल ?
यो मोनोरेलको परिकल्पना सुनसरीको हरिनगराका परमानन्द मेहताले गरेका थिए । उनले कम्पनि नै बनाएका थिए । विजयकुमार गच्छदार निकट रहेका उनले बनाएको कम्पनिमा पछि केही भिजनरी व्यक्तिहरु समावेश भएपछि मोनोरेल निर्माणले थप गति लिएको हो ।
मोनोरेलको लागि अजय सत्यालको काठमाडौस्थित घरमा माघ ४ गते कार्यालयसमेत खोलिसकिएको छ । सामान्य रेलभन्दा मोनोरेल बनाउन तीन गुणा सस्तो पर्ने मेहताको भनाई छ । सडक माथि हुने हुँदा बन्द हड्तालले पनि असर नगर्ने र छिटोमा सेवा दिने उनले बताए ।
‘सर्वेको अनुमतिका लागि संघीय सरकारसँग अनुमती मागिदिएका छौं’ : मुख्यमन्त्री
मोनोरेल निर्माणको लागि कम्पनिको लबिङ प्रदेश सरकारसँग पुगेको छ । तर नीति नियम नबनिसकेकोले प्रदेश सरकारले अनुमति दिने अवस्था छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सर्वेका लागि अनुमती मागेको छ ।
‘संघले दिइसकेको अवस्था छैन, तर व्यवशायीहरुले आफ्नो तरिकाले लबिङ र पहल भने गरिरहनुभएको छ,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने । उनले मोनोरेलसम्बन्धि कार्यनीति प्रदेश सरकारले पास गरिसकेकोले काम गर्न समस्या नभएको बताए ।